Tramp Injifachuu Baayideniif Beekkannaa Waan Kennan Fakaata
Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis Doonaald Tramp yeroo jalqabaaf dilbata kaleessaa dimokraatichi Joo Baayiden torban lama dura filannoo geggeessame injifataniiru jechuu dhaan garuu injifatamuu isaanii hin dubbanne.
Ergaa twiteter walitti aansuun barreessaniin Tramp filannoo injifachuu kan hafaniif sababa sagaleen waliin dha’ame kan jedhu himannaa hundee hin qabaanne dhiyeesuu itti fufan.
Ripaablikaantichi prezidaant Tramp sabaa himaaleen Yunaayitid Isteetis ijoon martinuu Baayiden ffilannoo prezidaantummaa injifachuu dhaan Amajjii 20 hirbuu seenuuf kan dandeessisu sagalee miseensota ba’ii filannoo calalan 538 keessaa 270 ol argachuu isaanii beeksisan iyyuu sirnaan injifatamuu isaanii hin beeksisin jiru. Yeroo tokko yaada kennaniin Baayiden Filannoon sababa wal dha’eeff injifatan jedhan Tramp.
Baayideniif hoogganaa hojii bulhiinsa White House ta’uuf kan jiran Ron Klain sagantaa TV “Meet the Press” jedhuuf ibsa kennaniin barreeffamni Twitter Tramp Joo Baayidentiin prezidaantii hin taasisu ykn prezidaantii ta’uu hin dhorku. Kan murteessu uummata Ameerikaa ti jedhan.
Angawoonni filannoo guutuu biyyattii keessaa VOA fi dhaabbolii oduu ka biroof akka ibsanitti guyyaa filannoo rakkoolee xiqqoo sagalee laka’uu irratti argame kan injifachuu Baayiden hin jijjiirre irraan kan hafe filannoon wal dha’uu isaaf ragaa tokko iyyuu hin argine jedhan.
Tramp manneen murtii hedduutti himannaa dhiyeessanitti hin milkoofne. Filannoo akkaan falmisiisaa ta’e kanaaf Tramp injifacuu Baayiden simachuu diduun siyaasa Ameerikaa kan hammayyaa keessatti waan argamee hin beekne. Seerri simachuu qaba jedhu jiraachuu baatus kaadhimamtoonni prezidaantummaa Yunaayitidd Isteetis kanneen injifataman nama injifateef ergaa baga gammaddanii dabarsaafii turan.
Sirnaan injifatamuu isaanii simachuu qofa utuu hin taane Tramp, angawoonni bulchiinsa isaanii fi dhaaboliin mootummaa gareen prezidaanticha filatamanii dhimmootii aangoo dabarsuu ykn Baayiden ibsa tika nagaa nageenya biyyaaf sodaachisu kan prezidaantiif gyyaa guyyaan ibsamu akka hin arganne ugguran. Gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa duraanii John Bolton dabalatee Ripaablikaanonni injifannoo Baayideniif beekkannaa akka kennan gaafataniiru
Baayiden gorsitoota isaanii waliin attamiin mootummaa haaraa akka hundeessan akkasumas kaabineewwan muudaman ilaalchisee mari’ataa jiran. Kan itti aantuu prezidaantii ta’uun filataman Kamala Karis waliin dinagdee biyyaa ilaalchisee har’a ibsa kennuuf jiru.